Sina Dimefluthrin ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy menaka famonoana moka | Senton
Dimefluthrin ho an'ny emboka moka
Anaran'ny vokatra： Dimefluthrin
Bika Aman 'endrika：ranon-javatra
Anaran'ny vokatra Dimefluthrin
Entana fitsapana Valin'ny fitsapana
Bika Aman 'endrika mahay
sahy miteny 94,2%
Asidra maimaim-poana 0,02%
Fitaovana mivaingana ny fahadiovana moka DEET dia famoahana bibikely matetika ampiasaina amin'ny hoditra na amin'ny fitafiana mihanjahanja, mba hahakivy bibikely manaikitra.
1. Ny DEET dia manana karazana hetsika marobe, mahomby amin'ny a manohitra ny moka(Culicidae - Moka (Fianakaviana)), lalitra manaikitra, chigger, parasy ary kongona
2. DEET dia azo alaina ho vokatra aerosol ho an'ny hoditra sy fitafiana,
vokatra azo avy amin'ny ranoka ho an'ny hoditra sy fitafiana, menaka fanosotra amin'ny hoditra, mihinana fitaovana (oh: lamba famaohana lamba, fehin-tànana, lamban-databatra), vokatra voasoratra azo ampiasaina biby sy vokatra voasoratra anarana hampiasaina amin'ny sehatra.
Fitehirizana: Tehirizina ao anaty trano fanatobiana maina sy misy rivotra miaraka amina fonosana voaisy tombo-kase ary lavitra ny hamandoana. Sakano tsy ho avy ny orana raha sanatria levona mandritra Fitaovam-pitaterana.
Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny Mpanelanelana simika ara-pahasalamana, Fanaraha-maso ny lalitra, Fitsaboana ara-pahasalamana, Dinotefuran, Fahasalamam-bahoaka sy ny sisa.HEBEI SENTON dia orinasa mpivarotra varotra iraisam-pirenena matihanina any Shijiazhuang, Sina. Anisan'ny orinasa lehibe ny Agrochemicals,API& Mpanelanelana sy simika fototra. Miantehitra amin'ny mpiara-miasa maharitra sy ny ekipanay, manolo-tena izahay hanome ny vokatra mety indrindra sy ny serivisy tsara indrindra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ankehitriny.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana mivaingana avo lenta ny fahadiovana? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Azo antoka ny kalitaon'ny bibikely sy ny bibikely. Izahay dia China Factory Factory an'ny Dimefluthrin 94% TC ho an'nyFanaraha-maso moka. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: Agrochemical Prix tsara indrindra sy metoprene avo lenta
Manaraka: Stock stock 35575-96-3 Azamethiphos Miaraka Amin'ny Vidiny Tsara indrindra
Esbiothrin famonoana bibikely ambony kalitao an-trano
Esbiothrin famonoana bibikely mahomby
Famonoana bibikely avo lenta D-allethrin
Permethrin miantra amin'ny bibikely maro
Chlorempenthrin pestiside avo lenta